URUR SIYAASADEDKA CUSUB EE UDHIS OO SHEEGAY IN AY HAYAAN NIDAAM AY KU HAGI LAHAAYEEN DALKA | Toggaherer's Weblog
Hargaysa 24 March 2009 (THN)
Ururka dimoqraadiyada horumarinta iyo isbedel doonka Somaliland (UDHIS), oo ah urur dhawaan la aasasay oo ay ku bahoobeen siyaasiyiin, mujaahidiin, Aqoonyahan, waxgarad, culimaa’udiin iyo dad kale oo farabadan oo saluugay siyaasada xukuumada Riyaale iyo ta saddexda xisbi qaran-ba isla markaana u arka axsaabta qaranku inay gabeen kaalintoodii, iyagoo ku tilmaamay inay kursiga uun ku jihaysan yihiin balse qorshe kale uga hoosayn.
Sidaana waxay ku sheegeen warsaxaafadeed ay shalay soo saareen, gudoomiyaha ku meel gaadhka ah ee ururkaasi Muj Ciise Curaagte oo intii aanay warsaxafadeedkaasi warbaahinta u qaybin hadal kooban siiyey ayaa sheegay in ururkan ujeedadiisu tahay in u dalka u horseedo isbedel isla markaana dadka ururkan aasaasay aanay ku bahoobin qabiil iyo qaab hungiri toona balse ay ku midoobeen dalka ma dhisnaa, waxana uu ku sheegay siyaasada Riyaale iyo saddexda xisbi in ay isku mid yihiin oo waxba aanay is dhaamin wakhtiguna ka wada dhamaaday.
Warsaxaafadeedkana waxa nuxurkiisuuahaa sidan:- “ UDHIS waxay aaminsan tahay in sida kaliya ee lagu gaadhi karo cadaalad iyo sinaaan tahay in la maro hab dimuqraadiyadeed siyaasadeed oo Somaliland u keeni kara nabad iyo deganaansho buuxa oo ku taagan dhidibo ad adaga iyo qorshe leh yididilooyin lagu hirto maamulkiisu hufan yahay.
UDHIS waxay u tafo xaydatay isbedel faa’iidaydiisu samayso dadka intooda badan ee aan ka koobnayn intan yar ee faro ku tiriska ah ee haysa hogaanka siyaasada, isbedelkaas oo soo saara wiilal iyo gabdho ka qaybgala hogaaminta qaranka.
Imika ahaan, nadaamka siyaasadeed ee jira wuxu ku dhaqmaa hab laba wajiile ah: ka kowaad waa mid leh waji dimuqraadiyadeed sawaaban oo loogu talo galay bulshada caalamiga ah, laakiin dhalanteed ah, ka labaadna waa midka abuuray xaalada ay Somaliladu ku tilmaansato labeeb.
Tusaale madaxweyne leh awood fulineed waxa loo turjuntay inay la mid tahay ta maraykanka, iyadoo dhinaca kale golaha Guurtida oo mushahar qaatana loo fahmay inuu la mid yahay ka guriga odayaasha (House of Lords) ee boqortooyada midowga UK.
Markii la isku daray awoodii madaxweynaha iyo awoodii golaha Guurtida waxa beermay nidaamkii wadanka lagu maamulayey, nidaamkaas oo madaxweynihii imbaraadoorka noqday isla markiiba yahay taliyaha guud ee ciidmada qalabka sida, oo sida la ogyahay aan lahayn darajooyin ay ku kala amar qataan gudahooda, sidaa darteed ayuu madaxweynuhu hayaa nin taliye guud ilaa taliye kooxeed.
Nidaamka ku sifoobay labeebku wuxuu gaadhay halkii ugu dambeysay jabkiisa oo la mida xaaladii uu gaadhay macalinkii kacaanka Siyaad Barre ee hanti wadaga cilmiga ku dhisan iyo xasuuqa isirka isku badhxay.
Qoladii sheegan jirtay mucaaradkuna iyagana loogama fadhiyo isbedel rajo abuura, waxay la mid yihiin maamulkan kursiga uga dheereeyey, kaliya waxa ka maqan taliska ciidamada qalabka sida, gamcahana ma gelin karaan qasnadaha laga buuxsday lacagta ummadda waa mucaarad kursi doon ah ee maaha mucaarad wax inay hagaajiyaan doonaya.
Xaalada werwerka leh iyo halista taagan:
Kama warhayno dhibaato kasta oo wadankeena gilgisha halkay ku dambayso, warbaahinta qarankana kama maqalno wax ina khuseeya haddii laga tagi wao, wararka aynu hayno waxa ka mida;
Khilaafka guddida doorashooyinka iyo deeq bixiyeyaasha ee ku saabsan xisaab celinta.
Xilligii madaxweynuhu xafiiska haynayey oo muddo dhaafay.
Wararka ku tirikuteenka ah ee sheegaya in qaraxyo laga cabsi qabo inay ka dhacaan Hargeysa iyo magaalooyin kale oo Somaliland ah oo la mida qaraxyadii lala beegsaday caasimada 29 October,2008.
Dhibaatooyinka lacago badan oo dadka laga dhacay ee khiyaamada ku dhisnaa
Xumadii iyo xaraaradii doorashada oo cirka isku shareeray.
Sharciyadii saddexdii xisbi oo dhamaatay oo muddadoodu ahayd 5 sanno waa hore ayey dhamaatay, taas oo ka dhigaysa hawlahooda mid aan sharci ahayn.
Budhcada hubaysan oo ka dilaacay magaalooyinka iyo dhalinyarada midiyaha iyo bilaawayaasha ku baadhanaya habeenkii dadweynaha oo tiro beelay.
hawlaha qarsoodiga ah ee ururo islaaminimada ku dhuumanaya ay ka wadaan wadanka iyagoo taageero dhaqaale ka helaya wadamado, ururo iyo ashkhaasba ujeedadooduna tahay awood korodhsi.
Wuufada shisheeyaha ee kusoo qulqulaya Somaliland oo ka socota wadamada aynu saaxiibka nahay oo ka warwarsan xaaladeena siyaasadeed.
Dhalinyarada la niyad jabtay shaqo la’aanta ee isku miidaamiyey badaha oo maydkoodii sababaynay oo badaha waaweyn ee aduunka.
Shaqo la’aanta baahsan oo lagu tilmaamayo ta ugu weyn aduunka ee ku habsatay wadanka.
Waa maxay fariinta reer UDHIS rabaan inay ummadda u gudbiyaan:
Marka ay isku milmaan dhibaatooyin siyaasadeed iyo dhaqaale xumo waxa ka dhasha sicir barar, qiimo dhac ku yimaada lacagta wadanka, haddiii aan laga foojignaan, waxa abuuri karta xaalada qas iyo qalanqal xambaarsan oo halis noqon kara.
Markaynu fiirino xaaladaha warwarka leh ee ina soo foodsaaray waxa inala gudboon in aynu ku talo bixino talaabooyinka soo socda:
In lagu wargeliyo ciidamada qalabka sida inay u hogaansamaan sharciga kana foojignaadaan cid gaar ahi u adeegsato dano gaara.
Xisbiyada siyaasadeed hala xusuusiyo inay ka foojignaadaan xaalad abuur la mida tii ka dhacday Kenya 2007-dii amase hadda ka taagan Madagascar.
Hay’adaha waaweyn ee maxaliga ah (LNGOS) iyo ururada bulshada rayidka hala waydiisto inay gacan ka geystaan furfurka dhibaatooyinka ka dhalankara xaaladahaadag ee ina ruxaya.
Mujaahidiintii SNM waa inaanay ogolaan inla baabiyo midhihii ka dhashay halgankii qadhaadhaa ee ay soo galeen, guushii ay naftooda u soo hureena aanay ku ciyaarin koox faro ku tirisa oo dano gaara wadata.
Wadamada daneeya nabadgelyada Somaliland waxa la gudboon inay qaataan kaalinta la gudboon.
Hadaanu nahay UDHIS waligayo iyo abidkayo ogolaan mayno in dad dano gaara wataa ay go’aan ku yeeshaan mustaqbalka caruurtayadu sida uu noqonayo” ayey ku soo xidheen hadalkoosa